Manchester City oo iska xaadirisay Final-ka EFL Cup kaddib markii ay Man United ku soo garaaceen garoonka Old Trafford – Gool FM
(Manchester) 06 Jan 2021. Manchester City ayaa iska xaadirisay Final-ka tartanka EFL Cup kaddib markii ay garoonka Old Trafford ku soo garaaceen Manchester United, ciyaar ku dhammaaday 2-0.
Kulankan ayaa qeybta hore lagu kala nastay barbaro goolal la’aan ah, inkastoo labada dhinac saddex gool oo ay kala dhaliyeen lagu sheegay inay garab dhaaf ahaayeen.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybta labaad ee ciyaarta Man City ayaa goolka hore la timid waxaa 50’daqiiqo markii ay ciyaartu maray gool bowdada kaga dhacay ku dhaliyey John Stones, Man United ayaana lagu hoggaamiyey 1-0.
Manchester City ayaa markale gool labaad la timid waxaana kubbad gees laad ahayd oo ay iska soo saareen kubbad xoog leh bannaanka ka garaacay 83’daqiiqo xiddiga reer Brazil ee Fernandinho oo dabamariyey goolhayaha Man Utd ee Dean Henderson, waxaana uu kulanku sidaas ku noqday 2-0 looga gacan sarreeyey Man United.
Kooxda uu hoggaamiyo Tababare Pep Guardiola ayaa ku adkaatay 2-0 waxaana ay iska xaadiriyeen Final-ka Koobka Magacyada badan ee EFL Cup-ka iyagoo la ciyaari doona Tottenham , waxaana halkeeda ka sii soconaysa inkaarta Man United oo ah inay ku harayaan Afar dhammaadka.